सरस्वतीनगर सुधार संघको १३ औं वार्षिक साधारण सभा भव्य रुपमा सम्पन्न « Bagmati Page
सरस्वतीनगर सुधार संघको १३ औं वार्षिक साधारण सभा भव्य रुपमा सम्पन्न
काठमाडौं । सरस्वतीनगर सुधार संघको १३ औं वार्षिक साधारण सभा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-६ मा रहेको सरस्वतीनगर सुधार संघले आ.व. २०७६/०७७ सालमा भएको वार्षिक कार्यप्रगती प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सरस्वतीनगर सुधार संघका पुर्व अध्यक्ष गर्ज बहादुर गुरुङले विगतलाई स्मरण गर्दै सरस्वतीनगर सुधार संघले विकासमा मात्र नभएर सामाजिक काममा निकै फड्को मारेको बताएका थिए । पुर्व अध्यक्ष गुरुङले विगतमा भन्दा नयाँ कार्यसमितिले निकै जागरुकताकासाथ काम गरेको समेत स्पष्ट पारे ।
सरस्वतीनगर सुधार संघका अध्यक्ष पेशल कुमार पहाडीले विकास निर्माणका कामहरु ढल निकाश, ढलान ब्लक निर्माण, सडक कालो पत्रे, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक बत्ति राख्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको बताए ।
अध्यक्ष पहाडीले धोवी खोला, साततले हुँदै मिलनचोक-आनिगुम्बा सम्म रहेको चखुञ्चा खहरे खोलालाई खोला कै रुपमा बग्न दिन संघले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाहरुमा पटक-पटक पहल गरी हाल खोलाको काम काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण मार्फत टेण्डरमा गई कार्य सुचारु हुन लागेको जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद भट्टराईले सरस्वतीनगर सुधार संघले गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए । विकास निर्माणका काममा सरस्वतीनगर सुधार संघले राजनीतिलाई टाढा राखेर उदाहरणीय काम गरेको देख्दा उत्साहित रहेको बताए । उनले भने सरस्वतीनगर सुधार संघबाट अन्य टोल सुधार समितिले विकास निर्माणका काम र सामाजिक काम गर्न सिक्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
रघुनाथ भण्डारीले सबैको साथ र सहयोग र सबै एकजुट भएका कारण सरस्वतीनगर सुधार संघ आज यहा सम्म आएको बताए । टोलका सबैको सहयोग र योगदानका कारण संघले धेरै कामहरु गर्न सफल भएको जानकारी गराए ।
पूर्व कोषाध्यक्ष तथा समाजसेवी रामहरी श्रेष्ठले विकास निर्माण तथा सामाजिक काममा युवा पीडिलाई अगाडी सारेर काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । युवाहरुलाई अगाडी सारेर काम गर्न सके मात्र समाजको विकास हुने बताउँदै उनले सरस्वतीनगमा भएका समस्या समाधानका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
पुन्यलोचन आचार्यले हिजो महाङ्काल फाँटबाट शुरु भएको संघ हाल एउटा सहरका रुपमा परिणत हुँदा निकै खुशी महशुस गरेको धारणा व्यक्त गरे । विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु गर्दा संघले स्थानीयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले सरस्वतीनगर सुधार संघले मुख्य चोक र अन्य महत्वपूणर् स्थानमा सीसीटिभि राख्न समेत अनुरोध गरे ।
ओखलढुंगा बाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा सरस्वतीनगर सुधार संघका सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र कुमार मास्केले सरस्वतीनगर सुधार संघले २ रोपनी क्षेत्रफलमा भौतिक पूर्वाधार र अन्य सम्रचना निर्माण गर्न सम्भव भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
सल्लाहकार मास्केले संघले हरेक विकास निर्माणका काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीको मात्र भर नपरी कामको गुणस्तरलाई समितिले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । विभिन्न सम्रचना स्तरोन्नती र विकास निर्माण गर्दा सम्पुणर् सदस्य एवं टोलवासीको सल्लाह अनुसारका कामगर्न सुझाएका थिए ।
सल्लाहकार शेखरनाथ आचार्यले कोठामा सिमित रहेको संघलाई विभिन्न समस्या र चुनौतिको सामना गर्दै हाल आफ्नै सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित भवनमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा निकै उत्साहित भएको बताए । उनले टोलको महत्व र आवश्यक्ता अनुसारका काममा संघले सधै सक्रिय भएर लाग्न अनुरोध गरे ।
त्यसैगरी सल्लाहकार शागर लुईटेलले विकास निर्माणका काम सगै युवालक्षित कार्यक्रमहरु गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले युवाहरुलाई दीर्घकालिन रुपमा सोचेर नयाँ अवधारणाका साथ अगाडी बढ्ने योजना बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सरस्वतीनगर सुधार संघको उत्कृष्ट कर्मचारी कणर् बहादुर साउद र उत्कृष्ट सदस्य ग्याल्वु शेर्पालाई सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन संघका सचिव शालिकराम तिमल्सिनाले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य संघका वर्तमान उपाध्यक्ष अष्ट बहादुर गुरुङले राखेका थिए ।